Sida loo aqriyo liiska mushaarka oo aad ogaato inay caadi tahay | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Waxaa jira shaqaale badan oo adduunka ah oo haysta shaki marka aad aqrinaysid liiskaaga mushaarka gaar ahaan dadka ka shakisan in lacagaha si sax ah loo bixiyo. Si loo hubiyo inay runti ku siinayaan qadarka ay shirkaddu ku siinayso iyo in inta kale ee xogtu ay sax tahay, waa muhiim inaad bartaan akhrinta mushaharka ogowna mid kasta oo ka mid ah xogta laga helay u dhiganta.
Dadka badankood waxay u arkaan mushaharkooda inay yihiin qaddarka lacagta ah ee la ururinayo bil ilaa bil iyo inay tahay inay ku shubtaan koontada; Si kastaba ha noqotee, mushahar bixinta waa inay umuuqataa wadarta xisaabinta waxyaabaha ay tahay in lagu soo oogo waana tan sida aan kuugu baran doonno inaad aqriso.
1 Muxuu yahay mushahar bixinta
2 Xogta ugu horreysa waxaan ka helnaa liiska mushahar bixinta
4 Iskudarka mushaharku waa sidan soo socota
4.1 Mushahar aasaasi ah
4.2 Kordhinta mushaharka
4.3 Waqtiga dheeriga ee shaqaale kasta
4.4 Mushaharka nooc.
5 Iskudhin la'aanta mushaharka
5.1 Xaqiijinta ama sahayda
5.2 Canshuuraha dakhliga shaqsiyeed
5.3 Qaybaha ay SS naga dhigeyso
5.4 Shaqo la’aan
5.5 Waqtiga dheeraadka ah ee xoog ku darsiga
6 Wadarta dareeraha la helayo
Muxuu yahay mushahar bixinta
Mushahar bixinta waa waxa loo fahmay inay tahay dukumiintiga qasabka ah ee ay tahay inay shirkadu siiso shaqaalaha markasta oo ay tahay in lagu daro xogta shirkada iyo shaqada ay sheegtay in shaqaaluhu sameynayo. Xogta dheeriga ah ee ay tahay in lagu daro waa muddada shaqada ee uu qofku ka tirsanaa shirkadda ama qaddarka dhaqaale ee la siin doono shaqaalaha mid kasta oo ka mid ah waxyaabaha ay ka qabtaan shirkadda dhexdeeda.
Qoraalkan, waxaan u soconaa baro sida loo akhriyo mushaharkaaga oo buuxa iyo waliba si xisaab sida tirada loo helo bil kasta bil kaste ayaad kaheleysaa koontadaada bangiga.
Xogta ugu horreysa waxaan ka helnaa liiska mushahar bixinta
Waxa ugu horreeya ee aan ka helno mushahar bixinta waa xogta labada dhinac, taas oo ah, dhinac, xogta shirkadda iyo dhinaca kale, xogta shaqaalaha. Xogta shirkadda, magaca sharciga ah ee shirkadda la sheegay waa inuu ka muuqdaa, bogga bulshada iyo CIF. Lambarka xigashada ee SS waa inuu sidoo kale muuqdaa.
Dhinaca kale, xogtaada ayaa soo muuqan doonta, oo ay tahay inuu ku jiro magaca iyo aqoonsiga shaqaalaha. Intaas waxaa sii dheer, tabarucaada SS iyo qeybta xirfadeed ee qofka ka shaqeeya shirkadda waa in la sheegaa. Nooca qandaraaska aad qaadatay iyo intee in le'eg ayaad ka shaqeynaysay shirkadda.
Xogtan caadi ahaan ma kala duwanaan waxayna u adeegtaa in lagu aqoonsado labada dhinac.
Waxyaabaha kale ee ay tahay inaan maanka ku hayno waa taas mushaharku waa qaansheegad ay shirkaddu na siiso si loo diiwaan geliyo in bil na bil naloo siiyay. Qaansheeg ahaan, waxaa jira qodobbo qaarkood oo waliba ay tahay in had iyo jeer lagu daro, inkasta oo kuwani ay ku kala duwanaan karaan bil ka bil.
Akoonka jeegga ee qofka bixinaya iyo qofka lacagta qaadan doona sidoo kale waa wax caadi ah in la arko bilowga qandaraaska noocan ah ama wixii macluumaad kale ah ee labaduba ku heshiiyeen ee ka muuqan doona liiska mushaharka.
Qaybta labaad ee Mushaharka ayaan la kulmi doonnaa wixii soo kordha. Tani waa ikhtiyaar ay tahay inuu sharraxaad ka bixiyo markasta, isku soo wada duubku waa waxa lagu tirinayo dakhli ahaan aan ka helayno shirkadda shaqaale ahaan. Halkan waa in lagu xisaabtamo mushaharka iyo mushahar la'aanta.
Xaaladdan oo kale, iskudarka mushaharku waa qaddarka la siinayo shaqaalaha si loogu bixiyo mushaharka ay ka shaqeeyaan shirkadda iyo kuwa aan mushahar aheyn waa kuwa tixraacaya alaabada alaabada iyo adeegyada.
Waxyaabahani waa kuwa lagu bixiyo tikidhada cuntada ama lacag kasta oo kale sida gaadiidka.
Iskudarka mushaharku waa sidan soo socota
Mushahar aasaasi ah
Mushaharka aasaasiga waa mid ka mid ah waxyaabaha aan ognahay oo aan ka helno meelaha ugu sarreeya. Halkaan qaar ka mid ah mushahar bixintu waxay ku qeexayaan cadadka guud ee euro sanadkii, tusaale ahaan haddii aan heysano isku darka euro sanadkii sanadkii oo ah 12000 euro, lacagta aan heli doono bil walba waa 1000 euro.
Marka laga hadlayo kordhinta mushaharka, tani waxay saameyn ku yeelaneysaa waxyaabaha kala duwan ee xirfadlaha uu ku biirin karo shirkadda, tusaale ahaan aqoonta ama luqadaha ama xaqiiqda ah inuu leeyahay mas'uuliyado badan oo isaga ka sarreeya.
Kordhinta ayaa waliba lagu tirinayaa shaqaalaha ku takhasusay mid ka mid ah qodobbada shirkadda. Dadkani badanaa waxay kordhiyaan mushaharkooda oo ah 10000 euro sanadkii waxaana loo qaybiyaa laba iyo tobanka lacag bixin ee billaha ah + 2 lacag bixinno dheeri ah.
Waqtiga dheeriga ee shaqaale kasta
Qaybtani ma lahan dhammaan mushahar bixinta maadaama shirkado badani ay si gooni ah u bixiyaan xogtan iyada oo aan tan lagu darin mushaharkooda, laakiin shirkadaha haysta dhammaan xogtooda la aasaasay waxay ku daraan waqti dheeraad ah mushaharkooda waana tan ka muuqata qaybta dheeraadka ah. Saacadahaan waa in la bixiyaa haddii ay yihiin kuwo ikhtiyaari ah ama qasab ku ah shirkad kasta illaa iyo inta qandaraaskayagu uusan u muuqan si kale. Caadi ahaan, mid kasta oo ka mid ah waqtiga dheeriga ah ee la qabtay waa in lagu bixiyaa 25 euro.
Qaybtani waa qayb ka mid ah mushaharkooda laakiin way yara adag tahay in la caddeeyo waa maxay caddadka lacagta ee noocyada lagu bixin karo, maaddaama ay yihiin badeecooyin iyo adeegyo dheeri ah oo qofku helo. Tani waxay sidoo kale kuxirantahay qofka shaqaalaha ah oo dhihi kara ma doonayo wax aan aheyn lacag shaqadiisa ah.
Kharashaadka shidaalka ama bixinta gaadiidka ayaa waliba ku dhaca xulashadan.
Iskudhin la'aanta mushaharka
Xaqiijinta ama sahayda
Labadan lacagbixin waa kuwa la bixiyo marka la eego gunnooyinka ama xilliyada shaqaaluhu ku qasban yahay inuu wax ka cuno meel ka baxsan shaqada ama ku sameeyo kharash ku kacaya mushaharkiisa shaqada.
ka gunooyinka magdhawga muxuu ku siiyaa amniga bulshada
Tani waxay loola jeedaa nooc kasta oo gaadiid ah, wareejin ama ka joojin nooc ka mid ah eryitaan
Haddii ay jirto naafonimo ku meelgaar ah ama shaqo la'aan ku meel gaar ah doorashadan, qadarka lagu heshiiyey waa inuu yimaadaa.
Waxyaabaha ugu dambeeya ee aan mushaharka qaadanayn ma galayaan tabaruca sooshalka umana xisaabtamayaan marka laga jarayo cashuurta dakhliga shaqsiga.
Kaliya hoosta, waxaan kaheleynaa qeybta jarista taas oo ah waxyaabaha laga jarayo mushaarka billaha ah. Lacagtani waa kuwa lagu darey canshuurta dakhliga iyo SS.
Canshuurta dakhliga shaqsiyeed way ka duwan tahay mid kasta oo shaqaalaha ah, marka waa inaan ogaanno macnaha lacagtaan iyo gaar ahaan halka aan ka heli karno inta ku jirta mushaharkeenna.
Qaddarkani waa midka ay tahay in lagu dhejiyo bayaanka dakhliga. Haddii aan haysanno canshuur dakhli shaqsiyadeed oo aad u hooseeya, waxa caadiga ah waa inaan ku bixinno wax badan khasnadda marka soo-celinta la gaaro. Si kastaba ha noqotee, markay sarreyso, waxa caadiga ah waa inay na siiso inaan ku soo laabanno.
Qaybaha ay SS naga dhigeyso
Waxyaabaha caadiga ah. Tan waxaa lagu xisaabiyaa 4,7% ee mushaharka soo xarooday, hase yeeshe, waqtiga dheeriga ah laguma xisaabtami doono halkan.
Doorashadan waxaa loo tirinayaa iyadoo kuxiran qandaraaska uu qofku haysto. Marka laga hadlayo shaqaalaha heysta qandaraas guud, lacagta la tiriyey waxay gaareysaa 1,55%, hase yeeshe, dadka heysta qandaraas waqti-buuxa ama waqti-dhiman ah, waxay u noqon doontaa 1,60%.
Waqtiga dheeraadka ah ee xoog ku darsiga
Saacad kasta oo dheeri ah oo la sameeyo, qadarka 2% waa in laga jaro. Waqtiga dheeriga ah oo dhan wuxuu yeelan doonaa haynta hoose haddii ay dhacdo in dadka iyo shirkaddu isku raacaan, lagu kordhin karo saacadle ahaan.
Qaar ka mid ah mushahar bixinta ayaa leh fikradaha horay loo sii wado ama wixii kale ee laga jaro.
Wadarta dareeraha la helayo
Halkan waxaan ku arki doonaa wadarta guud ee ay tahay inaan ka helno shirkadda iyada oo la raacayo isku-darka iyo ka-goynta ee dhibic kasta na siiso.
Tani waa waxa aan ugu yeerno Dakhliga saafiga, maxaa hadhay markii la sameeyo kadib laga jaro mushaharka guud.
Qaddarka halkan ku soo baxa waa midka aan ka heli doonno akoonkeenna bangiga dhammaadka bisha.
Kuwani waa tillaabooyinka ay tahay in mushahar-bixinta la dhigo waana sida ay tahay inaad u akhrido. Dadka badankood waxay akhriyaan oo keliya ikhtiyaarka wadarta ah in la helo, iyagoon joojin inay dib u eegaan inta soo hartay si loo ogaado haddii ay runti tahay inta ay ku bixinayaan mushaharkaaga, inta ay tahay inaad dhab ahaan hesho.
Hadda oo aad ogtahay qaddarka ay tahay inaad runti ogaato, hubi liiskaaga mushaharka oo fiiri haddii qaddarku dhab ahaantii u dhigmayaan waxayna ku siinayaan waxa dhab ahaan ay tahay inaad hesho iyadoo lagu saleynayo dhammaan isku-darka iyo ka-goynta aad haysato.
Uma badna in lacagtu ay kala duwanaan doonto bil ka bil, sidaa darteed waxaad qaadataa isla qaddar bil kasta, si kastaba ha noqotee, waxay u badan tahay in haddii ay isbeddelayso sannad ka sannad.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Shaqada » Sida loo aqriyo mushaarka oo aad ogaato inay caadi tahay
Xasilooni darrada adduunka ma gaabin kartaa dib u soo kabashada dhaqaalaha?